Dagaal Udhaxeyey Meleeshiyo Beeleedyo ayaa Waxa uu ka Dhacay Magaalada Marka ee Xarunta Gobalka Shabeelada Hoose – STAR FM SOMALIA
Dagaal Udhaxeyey Meleeshiyo Beeleedyo ayaa Waxa uu ka Dhacay Magaalada Marka ee Xarunta Gobalka Shabeelada Hoose
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal khasaaro geystay oo u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed oo deegaanka wada daga.
Dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay Xaafada loo yaqaan waa Cunaynaa waa cabaynaa ee ku taallo Duleedka Magaalada Marka, waxaana ku dhintay qaar ka mid ah maleeshiyaadka dirirta ay dhexmartay.
Inta la xaqiijiyay saddex ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyooday dagaalkaasi, iyadoo macquul ay tahay in khasaaraha intaasi uu ka bato.
Xaafadaan lagu dagaalamay ayaa waxa ay xigtaa dhanka wadada aada Buufoow Bacaad ee Magaalada Marka ka baxda, dagaalka khasaaraha ka dhashay wuxuu dhacay shalay maqribkii, iyadoo saaka lasoo sheegaayo in dadka ay maqlayaan rasaas teel teel ah.
Qof ku sugan Magaalada Marka ayaa Dhacdo.com u sheegay inay jiraan dhaawacyo ka dhashay dagaalka oo labada dhinac soo kala gaaray, kuwaasi oo lagu daaweynaayo xaafadaha ay kala joogaan labada maleeshiyo beeleed ee dagaalka dhexmaray.
Nin Nabadoon ah oo Magaalada Marka jooga ayaa sheegay in saaka Xaafada Waa Cunaynaa Waa cabeynaa ee duleedka Magaalada Marka laga maqlaayo rasaas goos goos ah oo ay isweydaarsanayaan labada maleeshiyo beeleed ee halkaasi isku hor fadhida.
Xaalada Magaalada Marka ayaa kacsan, waxaana la sheegayaa inay socoto hub uruursi ay wadaan dhinacyada dagaalka uu u dhaxeeyo.
Horay Magaalada Marka waxaa uga dhacay dagaal beeleed khasaaro kala duwan geystay, inkastoo laga heshiiyay dagaaladaasi, hadana lama oga waxa dib u soo cusboonaysiiyay dagaaladaan u dhaxeeya labada maleeshiyo beeleed
Dawlada Marekanka iyo Wasaarada Maaliyada ee Soomaaliya ayaa Hashiis Wadagalay (Daawo Sawirada)